एप्पलले के ल्याउँदै छ ?- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
एप्पलले के ल्याउँदै छ ?
काठमाडौँ — एप्पलले हरेक वर्ष आयोजना गर्ने वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्स (डब्लूडब्लूडीसी) लाई आफ्नो नयाँ उत्पादन घोषणा र सार्वजनिक गर्ने मौकाका रुपमा सदुपयोग गर्दै आएको छ । उसले अधिकांश आइफोनको घोषणा सेप्टेम्बरमा गरे पनि अन्य उत्पादनको घोषणा र सार्वजनिकीकरण भने डेभलपर कन्फ्रेन्समा गर्दै आएको छ ।
एप्पलले यसपालि जुन ४ देखि यो कन्फ्रेन्स आयोजना गर्दैछ ।
एप्पलले यो अवसरमा आफ्ना के नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्दैछ ? यसमा केही उत्तर लगभग उस्तै हुन्छन् । जस्तो कि एप्पलले हरेक वर्षजसो आफ्नो डेभलपर कन्फ्रेन्समा आफ्नो अपरेटिङ सिस्टमको नयाँ संस्करणको घोषणा गर्छ । र, म्याकबुकका नयाँ संस्करण पनि सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उसले उत्पादन गर्ने आइवाच र अन्य सेवाको घोषणा पनि यो बेलामा गर्दै आएको छ । परम्परालाई विश्वास गर्ने हो भने यो वर्ष पनि यस्तै हुनेवाला छ, जस्तो यसअघि हुँदै आएको थियो । एप्पलले यो साता सार्वजनिक गर्न सक्ने नयाँ उत्पादनहरु :
एप्पलले अघिल्लो वर्ष यही कन्फ्रेन्सको अवसर पारेर आईओएस ११ को घोषणा गरेको थियो । यद्यपि उसको घोषणापछि पनि त्यसमा धेरै समस्या देखिए र उसले सुधार्दै लग्यो । नयाँ अपरेटिङ सिस्टममा नयाँ आवरणसहित केही नयाँ फिचर पक्कै आउनेछन् । त्यसबाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो, प्रयोगकर्तालाई धेरै समय स्मार्टफोन प्रयोग गर्न निरुत्साहित गर्ने फिचर ।
गुगलले केही साताअघि भएको आफ्नो वार्षिक डेभलपर कन्फ्रेन्समा प्रयोगकर्तालाई आफूले चाहेको समय जतिमात्रै स्मार्टफोन प्रयोग गर्न सघाउने फिचर ल्याउने घोषणा गरेको थियो । यो फिचर उसको एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टममा हुनेछ । एप्पलको नयाँ उत्पादन र सेवाबारे ‘लिक’ गरिरहेकाहरूको दाबी छ, यो पटक आईओएस १२ मा एन्ड्रोइडको यो फिचर समावेश हुनेछ ।
एप्पलले आफ्नो भ्वाइस असिस्टेन्ट सिरीलाई हरेक वर्ष सुधार्दै लगेको छ । धेरैभन्दा धेरै थर्ड पार्टी एपमा काम गर्ने, मानिसको आवाज चाँडै चिन्न सक्ने र सन्दर्भ मिल्ने खालको जवाफ दिने क्षमता सिरीमा बढ्दो छ । यो वर्ष यसमा के थप होला ? सम्भवत: सिरीमा केही सुधारिएको फिचर आउनेछन् ।
त्यसभन्दा मुख्य कुराचाहिँ सिरीले प्रयोगकर्ताको निर्देशनमा फोन गर्नेहरूलाई नम्र भाषामा अस्वीकृत भएको सन्देश दिन सक्नेछ । एप्पलले केही समयअघि दर्ता गरेको प्याटेन्ट राइटले यसको छनक दिएको छ जसमा प्रयोगकर्ताले कुनै फोन उठाउन नचाहेमा सिरीले स्वत: नम्र भाषामा सन्देश पठाउनेछ । केही साताअघि गुगलले पनि आफ्नो भ्वाइस असिस्टेन्ट सर्भिस गुगल असिस्टेन्टमा ६ वटा आवाज सुन्न मिल्ने सुविधा मिलाएको थियो । साथै, अहिले गुगल असिस्टेन्टमा हरेक पटक ओके गुगल भन्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाइएको छ ।
आफ्नो फाइभ एसपछिको फोनका रूपमा सन् २०१६ मा एप्पलले आइफोन एसई निकालेको थियो । सानो स्क्रिन भएको आइफोन तर आइफोन सिक्स र सिक्स एसको अधिकांश फिचर समेटेर । अहिले सम्भावना छ, एप्पलले आइफोन एटको फिचरसहित आइफोन एसई सार्वजनिक गर्नेछ । यसका केही विशेषता: आइफोन टेनको जस्तै हुनेछ तर मूल्य कम ।
आइफोन एसईको अनुभव आइफोनका लागि राम्रो पनि छ किनकि ठूलो स्क्रिन भएको आइफोन सिक्स र सिक्स एस नरुचाउनेका लागि आइफोन एसई प्रभावकारी भएको थियो र यसको बिक्री उल्लेख्य पनि भएको थियो । अहिले आइफोन टेनको बिक्री राम्रो भए पनि त्यो बजेटमा आइफोन नकिन्ने प्रयोगकर्ताका लागि आइफोन एसई टु उपयोगी हुनेछ । यसले मध्यम मूल्यको स्मार्टफोन बजारमा एप्पलको उपस्थिति पनि बलियो बनाउनेछ ।
म्याकबुक र आइप्याड
एप्पलले यो समय म्याकबुकको नयाँ मोडल घोषणा वा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसको बाहिरिएको दाबीहरूलाई आधार मान्ने हो भने १९.९ इन्च र १०.५ इन्च स्क्रिनका आइप्याड मोडलहरू सार्वजनिक गर्नेछ । यसमा सुधारिएका सुविधा त पक्कै हुनेछन् । त्यसबाहेक म्याकबुक र म्याकबुक मिनी सिरिजको नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
जेष्ठ ११, २०७५ हिमेश वज्राचार्य
काठमाडौँ — सन् २००६ को कोलम्बो दक्षिण एसियाली खेलकुद । सुगतदासा स्टेडियम । यो नै श्रीलंकाली राजधानीको मुख्य रंगशाला हो । एथलेटिक्सका लगभग सबै प्रतिस्पर्धा यहीं भएका थिए । श्रीलंका एथलेटिक्समा बलियो थियो नै, त्यसमाथि भारतको दरिलो उपस्थिति । यस्तोमा महिला १० हजार मिटर दौडमा नेपाली खेलाडीले कुनै पदक जित्ने छ भनेर सोचिएकै थिएन ।
हुन पनि दक्षिण एसियाली स्तरमा नेपालले पुरुषतर्फ राम्रै चुनौती पेस गरे पनि महिलातर्फ कमजोर नै छ । तर सोचलाई गलत सावित गरिन्, कान्छीमाया कोजुले । मलाई त्यो दिन, त्यो स्पर्धा अनि त्यो क्षण अझै ताजासँग याद छ । हामी केही पत्रकारले त्यो क्षणलाई आत्मसात् गर्न पाएका थियौं । दौड सुरु भएयता भारतकी प्रेज श्रदिधरणले सुरुदेखि नै अग्रता कायम गरिन् । दौडमा लगभग पूरा समय उनको पछाडि थिइन्, हाम्रै कान्छी । प्रेजले नयाँ रेकर्डसँगै स्वर्ण जितिन् । कान्छी उनी भन्दा २४ सेकेन्डले मात्र पछाडि परिन् ।
त्यसमा गुनासो गर्ने ठाउँ थिएन, आखिरमा कान्छीले रजत जितेकी थिइन् । नेपालका लागि कान्छीले गरेको यो ऐतिहासिक प्रदर्शन थियो । यसअघि कोही पनि नेपाली खेलाडीले दक्षिण एसियाली खेलकुदमा रजतसम्म पनि जितेको थिएन । जितेका जति पनि कांस्य थिए, ती सबै एक प्रकारले उपहार जस्तै थिए । कान्छीले भने त्यो पदक हकले जितेकी थिइन् । नेपाली एथलेटिक्स इतिहासमा यो नै महिलातर्फको अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो प्रदर्शन हो ।
कान्छीले के रजत जितिन्, नेपाली ‘क्याम्प’ मा खुसीको रहर छाएको थियो । विशेषत: एथलेटिक्ससँग सम्बन्धित जति पनि प्रशिक्षक र पदाधिकारी सगतदासा रंगशालामा थिए, ती सबैको अनुहारमा चम्किलो प्रसन्नता थियो । हामी पनि ट्रयाक नजिकै थियौं, ‘फिनिस लाइन’ नाघेयता कान्छीले सुरुमा ‘हुँकार’ भरिन् । असिनपसिन शरीरलाई केही आराम दिएपछि उनले हामीलाई सोधेकी थिइन्, ‘साँच्चै म दोस्रो भएँ है ?’ वास्तवमै यही स्वप्निल सफलता थियो, त्यो ।
अहिले कान्छीको यो प्रदर्शनले पनि १२ वर्ष काटिसकेको छ । त्यति बेला कान्छी भर्खरकी युवा थिइन्, २४ वर्षकी । कम उचाइ, त्यसलाई सुहाउने दुब्लो भन्न मिल्ने शरीर । त्यही कान्छीले त्यसयताको एक दशक नेपाली एथलेटिक्सको महिला मध्यम र लामो दूरीको दौडमा एकछत्र राज गरिन् । अहिले पनि हाफ अथवा पूरा म्याराथनमा कान्छीलाई चुनौती दिने कोही पनि छैन । उनले जसरी आफूलाई यसबीचको समयमा स्थापित गरिन्, यो नै उनको सफलताको खास कथा हो ।
नेपाली खेलुकदका लागि कान्छी किन विशेष छिन् त ? त्यसको उत्तर पनि यही हो । नेपाली एथलेटिक्सले उनी जत्तिको महिला खेलाडी पाएकै छैन । कान्छीको खेल जीवनमा धेरै उतारचढाव पाइन्छ । त्यसमा धेरै राम्रा पक्ष छन् अनि केही काला पक्ष पनि । यसबीच पनि उनले कहिल्यै दौडिन भने छोडिनन् । खेलाडीको काम खेल्ने हो भने उनले इमानदारीपूर्वक त्यो भूमिका निर्वाह पनि गरिन् । कान्छीको कमाल यही हो ।
यसपल्टको कान्तिपुर रनर हाफ म्याराथन पनि उनले आरामले जितिन् । उनको प्रिय प्रतिस्पर्धा हो, यो । कान्छीले यसपटक पनि दोडिँदै छिन् भन्ने के खबर आयो, सबैले एकै स्वरले भने, यसपल्ट पनि जित्ने त उनै होलान् । खासमा यसपल्ट पहिलो हुन उनले खासै मिहिनेत गर्नुपरेन । जितेयता उनी केही थकित भने देखिन् । सायद उनीमाथि उमेर पो हाबी हुन थालेको हो कि ? अहिले उनी ३६ वर्षकी भइन् । उनलाई जित्न गाह्रो त भएन, तर शरीरलाई भने केही गाह्रो भयो, यो उनकै भाषा थियो ।
ठीक एक वर्ष अगाडि फर्कने हो भने त्यति बेला पनि कान्तिपुर हाफ म्याराथन उनैले जितेकी थिइन् । त्यसो त उनले यो स्पर्धा जितेको कीर्तिमान पनि पाँचौंपल्ट पुगेको छ । यसमध्ये विशेष पोहोर नै रह्यो होला । त्यति बेला उनी एकपछि अर्को चोटबाट गुज्रिरहेकी थिइन् । चोटले उनलाई हुनसम्म दु:ख दिइरहेको थियो । यस्तोमा उनले सहभागिताको जोखिम उठाइन् । त्यति बेला उनले पनि दौडिँदै छिन् भन्दा केहीको प्रतिक्रिया थियो, यसपल्ट कान्छीले गर्न सक्ने केही होइन ।
डर थियो, उनले कतै दौड बीचमै छोड्ने त होइन ? अदम्य साहसकी कान्छीले सबैखाले अनुमानलाई फेरि गलत सावित गरिन् । जति बेला उनले फिनिस–लाइन छुन सफल रहिन्, फेरि एकपल्ट हुँकार भरिन् । यस्तै काम उनले धेरै अगाडि कोलम्बोमा पनि गरेकी थिइन् । यसपल्ट जित्दा उनको अनुहारमा सन्तोषको भाव देखिन्थ्यो, एक वर्ष अगाडि यही स्थितिमा उनको अनुहारमा आफूलाई प्रमाणित गरेको गर्व देखिन्थ्यो । त्यति बेला उनकै भाषामा उनलाई जसरी पनि दौड जित्नु थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ, कति वर्षसम्म कान्छीले कान्तिपुर हाफ म्याराथनमा दौडिने हो ? अथवा त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न कान्छीले संन्यास लिने कहिले हो ? आखिरमा उमेर त संन्यासको संघारमा पुगिसकेको छ । उनी चाहन्छिन्, सके त पूरा जीवन दौडिरहुँ जस्तो लाग्छ । तर खेलाडीले चाह्यो भन्दै यस्तो हुने त होइन नै । सायद अर्को वर्ष उनी अन्तिम पटक कान्तिपुर म्याराथनमा दौडिने छिन् । सायद जित्ने पनि छिन् । कान्तिपुर म्याराथन उनलाई निकै प्रिय छ, यस्तोमा कान्छीले मन फेर्न पनि बेर छैन, यो सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
कान्छी साँच्चै नेपाली एथलेटिक्सका लागि विशेष रहनु पछाडि उनी जहाँबाट आइन् र जसरी आफूलाई एथलेटिक्सतर्फ मोडिन्, त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ । भक्तपुरकी धाविका हुन्, उनी । यसअघि सायद भक्तपुरले उनी जत्तिको महिला खेलाडी दिएको थिएन । ब्यासीको मध्यमवर्गीय परिवारमा हुर्केकी कान्छी आफूले जानेदेखि दौडिन सुरु गरिन् । ख्यालख्यालमै यसरी दौडिन् कि यो नै उनको जीवन भयो ।
अहिले उनको ‘सीभी’ पल्टाउनुपर्छ, त्यसमा दक्षिण एसियाली खेलकुद मात्र छैन । छन् त एसियाली खेलकुद अनि ओलम्पिक पनि । नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर कान्छीले ओलम्पिक खेल्नु आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो । कान्छीलाई यसमा गर्व छ नै । यहाँनिर उनको जीवनका दुई घटनालाई दोहोर्‍याएर उल्लेख गर्न आवश्यक छ । उनी प्राय: यी घटनाको चर्चा गरेको मन पराउँदिनन् किनभने उनलाई यसमा पश्चाताप पनि छ । एकपल्ट उनी जापान पुगिन्, त्यहीं भासिने प्रयास गरिन् । तर सकिनन्, केही समयमै नेपाल फर्किन् ।
अर्कोपल्ट उनी केही समयका लागि क्यानडामा पनि हराइन् । पछि उनी त्यहाँबाट पनि फर्किन् । यी दुई घटनाले उनलाई पीडा दिएको हुनुपर्छ, त्यसो नगरेर हुन्छ भन्ने सोच बनेको पनि हुनुपर्छ । तर यी घटनाले उनलाई मानसिक रूपमा बलियो खेलाडी पनि बनायो । सम्भवत: उनी पछिल्लो समय जति पटक दौडिन्, त्यति पटक आफूलाई अब्बल सावित गरेर ती घटनालाई गौण बनाउने प्रयास गरिन् । यस्तो पुनरागमन कहाँ सजिलो हुन्छ र ?
यहाँनिर एउटा प्रश्न के पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने कान्छीपछि नयाँ पुस्ताका खेलाडी किन जन्मन सकेनन् ? यसको उत्तर सजिलो छैन, कान्छीलाई पनि यो सत्यताले दु:ख दिन्छ । अहिलेको उनको यो उमेरमा उनलाई गतिलो चुनौती दिने खेलाडी भए, कति राम्रो हुने थियो होला ? कान्छीको योजना छ, अबका केही वर्षमा उनी यस्तै योजनामा व्यस्त हुनेछिन् । योजना राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्ने । अहिले नै उनी धेरैका लागि ‘मोडेल’ खेलाडी हुन् नै, जसले दौडेर नाम, ख्याति, प्रतिष्ठा सबै कमाइन्, त्यो पनि आफ्नो देशका लागि । कान्छी कमालकी छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०७५ ११:१८